I-Coconut Grove Oasis
Coconut Grove, Northern Territory, i-Australia
I-airy duplex yesimanje ekhanyayo, enamathayela agcwele anendawo eningi nendawo engadini ukuze ujabulele impilo ye-Top End eshisayo. Iseduze ne-Nightcliff, isitolo esikhulu sendawo, izimakethe zangezimpelaviki kanye nokuhamba okuhle noma ukugibela amabhayisikili ngasosebeni lwangaphambili konke kuseduze. Isitobhi sebhasi esingaphambili singakuyisa edolobheni noma sikuyise eCasuarina square - indawo yokuthenga ephambili kaDarwin. Qedela ngezihlalo zangaphandle - jabulela ubusuku bakho ngokuthola uhambo lwezinsuku.
Ikhishi elifakwe ngokugcwele nakho konke obungakudinga. Zonke izitsha nezitsha zihlinzekwa. Iwashi langaphakathi eligcwele kanye ne-balcony yangemuva ebiyelwe. Izingane ezinoboya zamukelekile. Ubhasikidi wesidlo sasekuseni ungafakwa ngemali encane.
4.81(129 okushiwo abanye)
4.81 · 129 okushiwo abanye
I-Coconut Grove Oasis iseduze nezitolo nezimakethe zangezimpelaviki futhi isendaweni ekahle phakathi kweDarwin neCasuarina. Eduze namabhishi kanye nokuhamba phambili kosebe kanye namathrekhi wamabhayisikili. Izitolo ezinkulu zasendaweni zingaphakathi kwebanga lokuhamba futhi indawo yokupaka emgwaqweni iyatholakala.
Ngihlala eduze futhi ngijabulela ukusiza nganoma yiluphi usizo ongase uludinge.
Hlola ezinye izinketho ezise- Coconut Grove namaphethelo